Basantipur Times: नेपाल में मोदी के दिग्विजयअभियान के बाद हिंदुत्ववादियों के संरक्षण में अपदस्थ राजा ज्ञानेंद्र कर्मकांडी हिंदुत्व के साथ राजतंत्र की आपसी की जोरर कवायद में लगे हैं।इसी सिलसिले में यह रपट गौरतलब है।
नेपाल में मोदी के दिग्विजयअभियान के बाद हिंदुत्ववादियों के संरक्षण में अपदस्थ राजा ज्ञानेंद्र कर्मकांडी हिंदुत्व के साथ राजतंत्र की आपसी की जोरर कवायद में लगे हैं।इसी सिलसिले में यह रपट गौरतलब है।
र्म निरपेक्षता र कमल थापाको उल्टो रथयात्रा (मोहन गोले)
नेपाललाई पुनः हिन्दू राष्ट्र कायम गराउन थप दबाब दिने उद्देश्यले पुष ९ गतेदेखि मेची–महाकाली रथयात्रा सञ्चालन हुँदैछ । यो रथयात्राको संयोजन दोस्रो जनआन्दोलन ०६२÷६३ लाई दबाउन न्वरानदेखिको बल लगाउने कमल थापाको पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, ने पालले गरेका हुन् । रथयात्राकै पूर्वसन्ध्या पारेर केही दिनदेखि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र पनि तराईको शितलहरको पर्वाह नगरी मध्य तराईका हिन्दू शक्ति पीठहरुमा पूजापाठ गरिहिँड्दै छन् । सास हुन्जेल आश हुन्छ भने झैँ उनलाई अझै परमेश्वरको अनुकम्पाले केही भइहाल्छ कि भन्ने छ । यो आश ज्ञानेन्द्र जिवित छउञ्जेल रहने देखिन्छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आगमनमा पनि ज्ञानेन्द्र र कमल थापाले एकसाथ जिब्रो बाएका थिए तर जिब्रो बाउँदा नबाउँदै दुवैले ओठ, तालु सुकाउनु प¥यो ।
राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्र एकअर्काका पर्याय हुन् । विगतमा राजतन्त्रले हिन्दू राष्ट्रको संरक्षकको भूमिका निर्वाह गथ्र्यो भने हिन्दू राष्ट्रले राजतन्त्रलाई मलजल गर्ने काम गर्दथ्यो । ती दुईमध्ये एकको अभावमा अर्को रहन सक्दैन । २०६३ जेठ १५ गते नेपाली जनताको प्रतिनिधि संस्था व्यवस्थापिका संसद्ले ती दुवैको विधिवत् अवसान गराएका थिए । तर ८ वर्ष वित्दा नवित्दै फेरि १० वर्षे माओवादी जनयुद्ध, ०६२÷६३ को जनआन्दोलनको भावना र मर्म विपरित हिन्दू राष्ट्र व्युँताउने प्रयासहरु हुन थालेका छन् । संविधान निर्माणको तिथि नजिकिँदै जाँदा सुरु गरिएका यस्ता रथयात्राले कस्तो प्रभाव पार्ला ? सोचनिय विषय बनेको छ ।
प्रत्येक मानिस वा मानव समुदायको आ–आफ्नो जीवन पद्दतीहरु हुन्छन् । जीवनको विभिन्न पक्षलाई नियमित गर्नको लागि परिवार, समाज र समुदायको बीचमा विभिन्न मूल्य÷मान्यता र संस्कारहरु बनाइएका हुन्छन् । यी सामाजिक नियमहरु हुन् । यसलाई त्यो समुदायमा बस्नेहरुले पालना गर्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ र यसले समाजलाई एकरुपतामा बाँध्ने काम गर्दछ । यो सामाजिक संस्कारगत मान्यतालाई धर्मले निर्देशन गरेको हुन्छ । यो नै धर्म हो ।
मानवशास्त्री प्रा.डा. ओम गुरुङका अनुसार धर्म एउटा संस्कृतिको अभिन्न अंग हो जसलाई जीवन पद्दती पनि भनिन्छ । मानव समुदायको दैनिक जीवनमा आईपर्ने राजनीतिक, सामाजिक आर्थिक, साँस्कृतिक जीवनलाई नियमित गर्ने जुन संस्कारहरु हुन्छन् त्यो नै धर्म हो । त्यस अनुसार मानिसले आफ्नो किसिमको जीवन पद्दती अपनाउने गर्दछन् । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा धर्म व्यक्ति वा समुदायको आस्था र विश्वास पनि हो जसको आधारमा मानिसको जीवन पद्दतीको निर्माण गरिन्छ । धर्म र संस्कार एउटै कुरा नभएपनि यसको बीचमा नजिकको सम्बन्ध रहेको छ । त्यसैले धर्मले संस्कारलाई प्रभावित गर्दछ ।
कम्युनिष्ट विचारधाराका अनुसार पदार्थभित्र परिवर्तनको स्रोत खोज्ने र पदार्थ बाहिर परिवर्तनको स्रोत खोज्ने दुई धार छन् । आस्तिकले पदार्थभन्दा बाहिर अलौकिक शक्तिमा परिवर्तनको स्रोत खोज्दछ भने नास्तिकले पदार्थ भित्रै परिवर्तनको स्रोत खोज्दछ । त्यसैले माक्र्सले जव द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको आविस्कार ग¥यो, कम्युनिष्टहरु स्वतः धार्मिक दर्शनको विरुद्ध उभिन पुगे । विद्वान सीताराम ताामाङका अनुसार सुरुमा धर्मको प्रयोग मानव समाज विकासको विभिन्न चरणमा प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने पीडाबाट राहत पाउनको लागि गरेका थिए । मानव समाजको आदिम कालमा उत्पादक शक्तिहरुको निम्न स्तरका कारण प्राकृतिक शक्तिका सामु मानिसको निरीहताले धर्मको जन्म दिएको थियो ।
यसरी मानव समुदायले आफ्नै राहतका लागि स्थापना गरेको धर्मले वर्गीय समाजको जन्मसँगै शोषकवर्गको हतियारको रुपमा काम गर्न थाल्यो । धर्मले शोषक र शासक वर्गको सेवा ग¥यो । जनतालाई अलौकिक शक्तिमाथि निर्भर हुने र भाग्यलाई दोष दिने अर्थात कर्मको फल हो भन्ने धारणाको विकास गरायो । यसबाट उनीहरुको पराधिन मानसिकताले सिर्जनशीलतामा समेत अवरोध गरायो । धर्मले वर्गीय समाजमा मिहनत गरी खाने जनतालाई विश्व बदल्ने संघर्षमा सक्रिय भाग लिनबाट विमुख ग¥यो । यसर्थ, कार्ल माक्र्सले धर्मलाई अफिम भनेका छन् ।
यसरी शासक र शोषक वर्गले धर्मलाई एकलौटी पेवा जस्तो हतियार बनाएर श्रमजीवी वर्गलाई शोषण र उत्पीडनमा पारेको हुँदा उनीहरुले बनाएको धर्म (ईश्वर) को विरुद्ध नयाँ धर्म र ईश्वरको जन्म हुन पुग्यो । यसक्रममा नयाँ नयाँ धार्मिक मान्यताहरुको विकास भयो । यसरी बौद्ध, इशाई, इस्लाम आदि धर्महरु जन्मन पुगेका हुन् । ती धर्महरु शासकवर्गको कब्जामा नपरुञ्जेल विद्रोही र क्रान्तिकारी रहे तर समयक्रमसँगै सामन्तवाद, पुँजीवाद र साम्राज्यवादले धर्मलाई श्रमजीवी जनतामाथि शोषण गर्ने हतियारको रुपमा प्रयोग गर्न थाल्यो । आज पनि विस्तारवाद र साम्राज्यवादले धर्मलाई सर्वहारा वर्गको क्रान्ति होस् या राष्ट्रिय मुक्तिको आन्दोलन होस् ती सबैलाई दबाउने हतियारको रुपमा प्रयोग गर्दै आएको छ । नेपाललाई पुनः हिन्दू राष्ट्र बनाउने खेल पनि यही षडयन्त्र हो । विगतमा हिन्दू धर्म र राजतन्त्र बीच अन्योन्यास्रित सम्बन्ध थियो । एकले अर्कोलाई रक्षा गर्दथ्यो । तर जव राजतन्त्र ढल्यो, हिन्दू राष्ट्र पनि रहेन ।
तर सबैले बुझ्नुपर्छ कि धर्म मानिसको नितान्त व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा हो । धर्मलाई शासकहरुले राजनीतिसँग जोडेर हेर्ने र त्यसलाई राजनीति गर्ने अस्त्र बनाइएको कारण हिन्दूधर्ममाथि आम परिवर्तन पक्षधरहरुको अनास्था बढेर गयो । फेरि पनि केही व्यक्ति र संगठन यसको लागि जोडतोडका साथ लागेका छन् तर अव यो सम्भव छैन ।
माथि नै भनियो कि नेपाल धर्म निरपेक्ष मुलुक घोषणा भइसकेको छ । २०६३ जेठ १५ गते बसेको व्यवस्थापिका संसदले सर्वसम्मत रुपबाट नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राज्य घोषणा गरेको हो । ८०% भन्दा बढी हिन्दू सभासद् भएको संसदले नै परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्दै धर्मनिरपेक्षताको संवैधानिक व्यवस्था गरेको हो । यसलाई नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले समेत संस्थागत गरिसकेको छ र धारा ४ (१) मा 'नेपाल एक स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्म निरपेक्ष, समावेशी, संघीय, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक राज्य हो' उल्लेख छ । त्यसैले अव पनि धर्म निरपेक्षताको विरुद्धमा बोल्नु भनेको संविधानको बर्खिलापमा जानु हो । अहिले संविधानमा लिपिवद्ध भइसकेको कुरालाई उल्टाएर केही मान्छेहरु द्वन्द्व निम्त्याउने कोशिसमा छन् । त्यसको अगुवाई कमल थापाले गरिरहेको छ भने कांग्रेस, एमाले जस्ता पार्टीहरुले समेत जनताको नाडी छाम्नको लागि खुमबहादुर खड्काजस्ता मान्छेलाई उकास्दै छन् । तर अव यो काम गर्न तिनका तागतले पुग्दैन । देश धर्म निरपेक्ष भइसक्यो, अव पछि हट्न मिल्दैन, सक्दैन । यो १० वर्षे माओवादी जनयुद्ध, २०६२÷६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन र आदिवासी जनजाति, मधेशी/मुस्लिम आन्दोलनको उपलब्धि हो ।
धर्म निरपेक्षताको मूल भावना धर्म र राज्य अलग हुने भन्ने हो अर्थात राज्यको कुनै धर्म हुने छैन भन्ने हो । यसमा राज्यले कुनै धार्मिक कार्यमाथि र धर्मले राज्यको कुनै काम कारवाहीमा हस्तक्षेप गर्ने प्रक्रियाको अन्त गर्दछ । निरपेक्षतामा राज्यले कुनै एउटा धर्मलाई बोकेर हिँड्न मिल्दैन । तर नेपाल लामो समयसम्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र कायम रहेको कारण अहिले निरपेक्षतामाथि प्रश्न खडा गर्ने अतिवादी समूहले उग्र नारा उछालिरहेका छन् । उनीहरु ८१% सनातन हिन्दू धर्मावलम्बी रहेको देश भन्छन् । यो भन्दा उनीहरुसँग अरु तर्क छैन । उनीहरुले बुझ्नुपर्छ कि धार्मिक जनसंख्या स्थीर चिज होइन । आज ८१% हिन्दू छन्, भोली बौद्ध या अन्य धर्मावलम्बीको जनसंख्या पनि त्यति पुग्न सक्छ । त्यतिबेला फेरि बौद्ध राष्ट्र या मुस्लिम राष्ट्र घोषणा गर्ने हो र ? त्यसैले धर्म सापेक्ष र निरपेक्षताको सवालसँग धार्मिक जनसंख्यालाई जोडेर हेर्न मिल्दैन । यसलाई त व्यक्ति र समुदायको धार्मिक स्वतन्त्रताको सवालसँग जोडेर हेर्नुपर्छ ।
धर्म निरपेक्षताको आन्दोलन भनेको राज्यबाट धर्मलाई अलग गराउने संघर्ष मात्र हो । राज्यले कुनै धर्मलाई काखा र कुनैलाई पाखा लगाउने नीतिको विरुद्धमा हो । अन्धजातिवाद विरुद्धको लडाइँ हो धर्म निरपेक्षता । बुद्ध जन्मेको देश नेपाल धर्म निरपेक्ष हुनुपर्छ भनेर ७० वर्ष अघिदेखि धर्मोदय सभाले आवाज उठाउँदै आएको थियो । यसैगरी हिन्दू बाहेकका थुप्रै धर्मावलम्बीले यो विषयमा बहस चलाउँदै आएका थिए । त्यो सबैको आवाजलाई संस्थागत गरिएको मात्र हो । अतिवादीहरुले धर्मलाई राज्य सापेक्ष बनाउँछन् र कुनै अमुक धर्मलाई राज्यको ढिकुटीबाट अरबौं खन्याउँछन् । तर राज्यको काम भनेको सबै धर्म समुदायहरुलाई बराबरी मान्यता दिने, प्रचार प्रसार गर्न दिने, विकास गर्न पाउने लगायतका विषयमा सहजिकरण गर्ने मात्र हो । नागरिकले जुन धर्म मान्दछ, त्यो धर्मलाई राज्यले विना भेदभाव, विना अवरोध सबै धर्महरुलाई फस्टाउन पाउने वातावरण र अवसर उपलब्ध गराइदिने हो । यो धर्म मान्नुपर्छ, अर्को धर्म मान्नु हुँदैन भन्ने जस्ता मान्यता र धार्मिक नीति राज्यले बनाउनु हुँदैन ।
केहीले धर्म निरपेक्षता हिन्दू धर्मको विरुद्धमा हो भन्ने भ्रम फैलाइरहेका छन् । दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा गाच्छी र बाच्छी, सुगा र रुगाको नारामा एउटै पार्टीप्रति आस्थावान मतदाताहरुले दुईवटा पार्टीलाई मत बाँडेर मतदान गर्नुले पनि हिन्दू अतिवादीहरु मुलुकलाई प्रतिक्रान्तिमा धकेल्न उद्यत छन् भन्ने देखिन्छ । तर बुझ्नुपर्ने के हो भने धर्म निरपेक्षता भनेको हिन्दू धर्मलाई निषेध गर्नको लागि होइन । आज मुलुकमा धर्म निरपेक्षता घोषणा गरिएको ७÷८ वर्ष भइसक्यो, हिन्दूधर्मलाई कसले के अन्याय गरेको छ ? जनगणनामा उसको अझ प्रतिशत बढिरहेकै छ । धर्म निरपेक्षता भनेको अरु धर्म सरह सबैको बराबरी विकास गर्ने भनेको हो । यसमा राज्यबाट कुनै अमुक धर्मलाई विशेष खालको सेवा, सुविधा, अवसर उपलब्ध गराउने र अर्कोलाई निषेध गर्नु मिल्दैन । एउटा जात, समुदायको धर्म हिन्दू नजिकको साँस्कृतिक पर्व दशैं, तिहारमा राज्यले अनेकन खालका सेवा, सुविधा र प्रचारप्रसार गरिन्छ । तर अन्य जाति, समुदायको साँस्कृतिक पर्वमा कुनै सेवा, सुविधा राज्यले उपलब्ध गराउदैन । यसर्थ, धर्म निरपेक्षता भएपनि अझै मुलुकमा हिन्दू राज्यको प्रभाव र त्यसबाट सिर्जित विभेद कायम रहेको स्पष्ट हुन्छ ।
यसबाट प्रस्ट हुन्छ, जातप्रथामा आधारित हिन्दू वर्ण व्यवस्थालाई हिन्दू धर्म र खस अभिजात वर्गको सत्ताले अझै घोषित÷अघोषित रुपमा संरक्षण गर्दै आएको छ । जसले गर्दा हिन्दू बाहेकका धर्मावलम्बी र हिन्दू अन्तर्गतका दलित समेतले उत्पीडन भोगिरहेका छन् । यसर्थ, ती समुदायहरुमा धर्म त्याग्ने र साम्राज्यवादी शक्तिबाट प्रायोजित धर्म अंगाल्ने क्रम बढेको पनि देख्न सकिन्छ । जस्तोः २०४८ सालमा इशाई धर्मावलम्बीको जनसंख्या ३५२ मात्र थियो । २०५८ सालमा यो संख्या बढेर १३७२ पुग्यो भने २०६८ सालमा ६४६६ पुगेको छ । यो वृद्धिदर २७.३७% हो । बाँके जिल्लामा मात्र इशाई धर्मावलम्बीको वृद्धिदर ३७१% पुगेको छ । यसमा मुख्यतः विगतमा राज्यको एकल हिन्दूवादी नीति जिम्मेवार छ ।
आज कमल थापाहरुले धर्मलाई राजनीतिको साधन बनाउँदै दौडेका छन् । उनले यसैलाई साधन बनाउँदा दोस्रो संविधानसभामा २४ सीट पाए । त्यो मत हिन्दू अतिवादी भ्रममा परेका र पारिएका जनताको मत थियो । विचारणीय पक्ष यो छ कि उसलाई समानुपातिकमा मत दिने जनताले प्रत्यक्षमा मत दिन सकेनन् । यसले प्रस्ट पार्छ, उनले हिन्दू अतिवादको भ्रम छर्न त सके तर राजतन्त्रको रंग दल्न सकेनन् । मानिसलाई भ्रममा पार्ने, गुमराहमा राख्ने भनेको निश्चित समयसम्म हो । निरन्तर यसैलाई साधन बनाएर गरिखान्छु भन्यो भने त्यो सम्भव हुँदैन । ठूला दलहरुले सहमतिमा संविधान जारी गर्न नसक्दा उसले यो मत पाएको थियो । केही मतदाताहरु सौताको रीसले लोग्नेको काखमा पिशाव फेर्न पुगेका मात्र हुन् । सधैंभरि जनताले यो गल्ती गर्दैन । तसर्थ, संविधान निर्माण गरी देश र जनतालाई अग्रगतितर्फ हिडाउनु पर्ने बेलामा उल्टो रथयात्रा सञ्चालन गरेर प्रतिगामी बाटो तताउने कमल थापालाई भावी दिनमा कहाँ पु¥याउला ? हेर्न बाँकी छ ।
Posted by Banga at 5:13 AM